Translations < Myanmar (Burmese) < 5.7.x < GlotPress | WordPress.org
Translation of 5.7.x: Myanmar (Burmese)
Filter ↓ • Sort ↓ • All (4,294) • Translated (1,530) • Untranslated (2,764) • Waiting (0) • Fuzzy (0) • Warnings (0)
Your session has expired. You can log in again from this page or go to the login page. သင့်ဆက်ရှင်သက်တမ်းကုုန်ပါပြီ။ ဒီစာမျက်နှာတွင် နောက်တစ်ကြိမ်ပြန်ဝင်နိုင်သည် (သို့) ဝင်ရောက်ရန် စာမျက်နှာသို့ သွားပါ။	 Details
သင့်ဆက်ရှင်သက်တမ်းကုုန်ပါပြီ။ ဒီစာမျက်နှာတွင် နောက်တစ်ကြိမ်ပြန်ဝင်နိုင်သည် (သို့) ဝင်ရောက်ရန် စာမျက်နှာသို့ သွားပါ။
2014-09-01 10:44:34 UTC
The file URL has been copied to your clipboard You have to log in to addatranslation.	 Details
Could not set that as the thumbnail image. Tryadifferent attachment. ထိုပုံကို လက်မအရွယ်ရုပ်ပုံအဖြစ် အသုံးပြု ၍မရပါ။ အခြားတွဲချိတ်မှုဖြင့် ကြိုးစားကြည့်ပါ။	 Details
ထိုပုံကို လက်မအရွယ်ရုပ်ပုံအဖြစ် အသုံးပြု ၍မရပါ။ အခြားတွဲချိတ်မှုဖြင့် ကြိုးစားကြည့်ပါ။
2014-09-01 10:44:49 UTC
Error loading block: %s You have to log in to addatranslation.	 Details
Block rendered as empty. You have to log in to addatranslation.	 Details
Manage Reusable blocks You have to log in to addatranslation.	 Details
Add to Reusable blocks You have to log in to addatranslation.	 Details
Block created. You have to log in to addatranslation.	 Details
Untitled Reusable Block You have to log in to addatranslation.	 Details
Disable tips အကြံပြုချက်အား ရပ်နားပါ	 Details
2018-11-10 07:44:44 UTC
2020-05-09 15:29:04 UTC
Dennis Maang (dennismaang)
Got it ရပြီ	 Details
2018-11-02 19:59:14 UTC
See next tip အကြံပြုချက် နောက်တခု ကြည့်မည်	 Details
အကြံပြုချက် နောက်တခု ကြည့်မည်
2018-11-02 20:02:13 UTC
Error while uploading file %s to the media library. You have to log in to addatranslation.	 Details